Umhlahlandlela Wokugcina wamavidiyo wokuchaza (onezibonelo) | Martech Zone
Umhlahlandlela Wokugcina wamavidiyo wokuchaza (ngezibonelo)
NgoLwesibili, ngoJuni 3, i-2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Mhlawumbe uke wabona amawebhusayithi amaningi esebenzisa amavidiyo agqwayiziwe emakhasini awo okufika. Akunandaba ukuthi uwaqamba ngamavidiyo achazayo noma amavidiyo ezinkampani; bonke basebenzela inhloso efanayo: ukuchaza umkhiqizo noma insiza ngendlela elula futhi esheshayo, ebenza babe ithuluzi elihle lokumaketha kunoma yiliphi ibhizinisi.
Kungani kunezitayela ezahlukahlukene zamavidiyo wokuchaza? Isitayela ngasinye sinxenxa uhlobo oluthile lwezethameli futhi sizophinde sithinte isabelomali sanoma yikuphi ukukhiqizwa kwamavidiyo. Ukuze unake ukunakwa kwezilaleli zakho bese uqala ukuguqula ngempela, kufanele wazi ngayinye isitayela Wevidiyo Yokuchaza. Umbuzo uthi:
Yisiphi isitayela esihle sevidiyo esichazayo esichazayo sewebhusayithi yakho?
Siqoqe uhlu lwezitayela ezithandwa kakhulu zamavidiyo wokumaketha agqwayiziwe, kanye nezincomo zethu ezikhethekile ngayinye yazo.
Lokhu ukuthwebula okulula kwesikrini noma ifilimu yevidiyo ekhombisa ukuthi ungalusebenzisa kanjani uhlelo, iwebhusayithi noma isoftware. Amavidiyo e-Screencast uhlobo lwevidiyo olunebhajethi ephansi kunawo wonke kodwa alusizo ngokulinganayo. Lawa mavidiyo akhuluma kakhulu ngemfundo kunokwenza uphawu. Ngokuvamile angamavidiyo amade (ngaphezu kwemizuzu engu-5), futhi asebenza kahle kulabo abafuna ukubona ukuthi umkhiqizo usebenza kanjani ngaphambi kokuba bathathe isenzo.
Isitayela sekhathuni noma ividiyo ye-Character Animated
Le ngenye yezinhlobo zamavidiyo achazayo ethandwa kakhulu emakethe. Indaba iholwa ngumlingiswa ophilayo, onikezwa inkinga enkulu angenakuyixazulula. Yilapho umkhiqizo noma insizakalo yakho ivela khona… isindisa usuku!
Umlingiswa uvamise ukumela i-brand persona yakho (izithameli eziqondiwe), ngakho-ke kubalulekile ukuthi ube nomlingiswa wokuklama ngokwezifiso ohlobana nabo ngokweqiniso, enze uphawu lomkhiqizo wakho ngokuwunika imizwa nobuntu. Lezi zinhlobo zamavidiyo zinemiphumela emihle ngoba zisheshe zibambe ababukeli futhi kumnandi ngempela ukuzibuka.
Le ndlela esezingeni eliphakeme futhi epholile ekuqaleni yadalwa ngumdwebi wezithombe owadweba ibhodi elimhlophe ngenkathi iqoshwa yikhamera. Kamuva, le ndlela yavela futhi manje isidalwe ngokwamanani. Emuva ngo-2007, i-UPS yabonisa ama-Whiteboard Commercials, kwathi ngo-2010 iRoyal Society of Arts yakha ukugqwayiza kwamabhodi amhlophe kusuka ezinkulumweni ezikhethiwe, okwenza isiteshi se-Youtube se-RSA sibe yisiteshi esingu- # esingenzi nzuzo emhlabeni wonke.
Izithombe ze-Whiteboard kuyindlela eheha kakhulu, ngoba inendlela yokufunda, lapho okuqukethwe kwenziwa khona phambi kwamehlo wombukeli.
Ihluzo ze-Motion, empeleni, ziyizinto zemidwebo ezinyakazayo ezisebenzisa amandla emibala nobujamo ukudlulisa imiyalezo eyinkimbinkimbi obekungeke kwenzeke ukuyidlulisa ngenye indlela. Lawa mavidiyo anikela ngezitayela ezibandakanya amabhizinisi ezinamaphrofayili abucayi kakhulu futhi ayindlela enhle yokuchaza imiqondo engaqondakali.
Lawa mavidiyo achazayo anomthelela omkhulu emizamweni yokuxhumana ye-B2B.
I-Motion Graphics enezici ze-3D
Ukugqwayiza kwe-Motion Graphics ngokuhlanganiswa kwezinto ze-3D kuletha ukubukeka okuhle kakhulu futhi okuyinkimbinkimbi. Zikulungele ukwenza inkampani yakho ivelele ngaphezu komncintiswano.
I-Motion Graphics iyinketho ephelele yezinkampani nemikhiqizo ehlobene nobuchwepheshe obusha, izinsizakalo zedijithali, izinhlelo zokusebenza noma isoftware.
Isitayela sekhathuni nge-Motion Graphics
Amavidiyo Wencazelo Yesitayela Sopopayi anama-Motion Graphics angenye yezinhlobo ezidume kakhulu zamavidiyo opopayi laphaya futhi, njengoba kulula njengokuzwakala kwawo, ahlanganisa ukuhlanganiswa kwamasu. Abalingiswa bekhathuni bahola indaba futhi banikeze indlela eseduze nezethameli, ngenkathi ukusetshenziswa kwe-animation ihluzo esetshenziswayo kuchaza imiqondo eyinkimbinkimbi.
Ngalesi sitayela, sithola okuhle kunakho konke imihlaba - Isici sobungani nezingathekiso ezihlekisayo zevidiyo yesitayela sekhathuni namandla okubandakanya ukugqwayiza kwendlela yehluzo lokunyakaza.
Sincoma ukuxhumana kwe-B2C, kepha bangasebenzela kahle amabhizinisi amancane kanye nokuqala futhi.
Misa-motion noma Claymation Animated Imiqophi
Amavidiyo wokuchaza ama-Stop-motion angenye yezindlela ezindala kakhulu ngoba awancikile kubuchwepheshe bedijithali obuphezulu! Lawa amavidiyo adalwe ngezandla - ifreyimu efezekile ngozimele.
Lokhu kugqama kukhiqizwa ngokuqopha ifreyimu ngayinye, noma isithombe esisamile bese sidlala ozimele abarekhodiwe ngokulandelana okusheshayo, kuthatha isikhathi eside ukukhiqiza. Imiphumela ihluke ngokuphelele futhi iyamangalisa impela. Ukumiswa kokuma kuyindlela enhle uma yenziwe kahle, futhi kungabiza kakhulu.
Sincoma lolu hlobo lwevidiyo uma ufuna ukusebenzisa indlela enothando nezithameli zakho.
Amavidiyo we-3D Animated
A ividiyo ye-3D epopayiwe kungamangalisa ngempela, ngoba akunamkhawulo kulokho okungafezwa yividiyo ye-3D. Kodwa-ke, le nketho ingenye ebiza kakhulu, ngakho-ke akuyona inketho yokuqalisa ngezabelomali ezinomkhawulo.
Uma ucabanga ngempela ngokwenza ividiyo e-animated ye-3D futhi ukwazi ukuyikhokhela, kufanele wenze umsebenzi wesikole kuqala bese usesha izinkampani ezinolwazi. Ividiyo ephansi yesabelomali se-3D empeleni ingaholela emiphumeleni emibi.
Manje usunokubuka konke okuhle ukuthi hlobo luni lwevidiyo yokuchaza echazayo evumelana kahle nekhasi lakho lebhizinisi, futhi elizodonsa ukunaka kwezilaleli zakho ngempumelelo. Ufuna okuningi? Landa i-ebook yamahhala yeYum Yum Video - Isiqondisi Esiphezulu Ekuchazeni Amavidiyo!
Ukudalulwa: U-Yum Yum usize ukuhlanganisa lokhu okuthunyelwe Martech Zone abafundi futhi sisebenze nabo ngqo kumaphrojekthi ambalwa!
Tags: Amavidiyo we-3d opopayiIzithombe ze-3dIvidiyo engu-3dividiyo egqwayizayoividiyo yekhathuniuhlamvu animated videoizithombe zobumbaukubumbaividiyo echazayoamavidiyo achazayoihluzo zokunyakazaividiyo yehluzo ezinyakazayoscreencast ividiyoukuma-ukunyakazaividiyo emhlophe yokugqwayizaividiyo echaza ibhodi elimhlophe
Abesifazane Nabesilisa Bayisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana kanye Neselula Ngokuhlukile
Imithombo Yezokuxhumana Yezimboni ze-Unsexy B2B
Ngiku-habbit yokusesha lolu hlobo lwezinto ngakho kuchazwe kahle futhi kuchazwe kahle ngesibonelo esihle.
Ngiyabonga kakhulu ngalo mbhalo namavidiyo afundisayo.
May 14, 2015 ku-6: 16 PM
Manje noma nini lapho amaklayenti ami ebuza ukuthi hlobo luni lwamavidiyo wokuchaza engiwenzayo ngiba nalo mhlahlandlela omuhle wokuwabonisa. Ngiyabonga uDouglas ngokuhlanganisa lo mhlahlandlela. Ngabe kukhona lapho nina bantu nikwazi ukufaka ibhizinisi lami kubhulogi yakho? Ngibeka i-imeyili yami esigabeni sokuphawula